अभिमत: पाल्पाको पञ्चायत स्तम्भमा झुक्किए दाहाल
पाल्पाको पञ्चायत स्तम्भमा झुक्किए दाहाल
टेकनारायण भट्टराई, पाल्पा असोज ७- फोटो खिचिसकेपछि दाहालका कानमा पर्‍यो- यो त पञ्चायत स्तम्भ हो। मुस्कुराउँदै उनले सोधे- 'हँ, हो र भन्या ?' सबै गलल् हाँसे। निजी क्यामेरामेनतर्फ हेरेर उनी बोले- 'फोटो लिइसक्नु भो ?' हाँसो झन् थपियो।
'राम्रो बनाएका रैछन्'- दाहालले पञ्चायत स्तम्भ रुचाएछन्। उनले ठट्यौली पारामा स्थानीय पार्टी नेतातर्फ संकेत गर्दै भने- तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि यसलाई बचाईराख्नु भा रैछ त !' यसो भन्दा उनी आँफै मुख छोपेर हाँसेका थिए। उनले सबैलाई बेस्सरी हँसाए, आफू पनि हाँसे। पाल्पा जिल्ला सेक्रेटरी नेत्र पाण्डेले हाँसो रोक्दै तुरुन्तै जवाफ फर्काए- अलि मथि पर्‍यो कमरेड, बजारतिर भए रहन्नथ्यो।'
बुधबार बिहानै तानेसेनको श्रीनगर डाँडामा सपरिवार भ्रमण गर्न निस्केका दाहालले श्रीनगर डाँडा खुबै राम्रो माने। 'यति राम्रो ठाउँ रैछ, तपाईहरुले के अलपत्रै पारेको ?' पार्टीका जिल्ला नेतालाई उनले निर्देशन दिए- यसलाई राम्रो बनाउनुपर्‍यो, यहाँ निकै राम्रो पार्क बन्छ।
दाहाल परिवारलाई मौसमले भने साथ दिएन। बुधबार बिहानैदेखि श्रीनगर डाँडालाई छपक्कै कुहिरोले ढाकेको थियो। उनलाई कुहिरोले दिक्क लागेछ। अनि भने- कुहिरो पनि मै आउने दिन लाग्नुपर्ने ? हिमाल देख्न पाइन्छ भन्ने लाग्याथ्यो।'
पत्नी सीता, छोरा प्रकाश, छोरी-ज्वाइँ र तीन नातिनिसँग श्रीनगर डाँडामा दाहालले झण्डै एक घण्टा घुमघाम गरे।
सीता अलि हिँड्न नसक्ने भइछन्। सीता थकाईले सुसेल्दै बोलिन्- भूमिगत कालमा यस्ता डाँडा धेरै हिँडियो अब त नसकिने भैइएछ।' केही अगाडि नातिनीको हात समात्दै लम्केका दाहाल पत्नीको कुरा सुनेर पछि फर्केर बोले- त्यै भर तिमीलाई नहिँड, गाडीमै बस त भन्या थें मैले।'
गाडी श्रीनगर डाँडामै छाडेर मिसन अस्पताल हेर्न दाहाल परिवार अर्कै बाटो लग्यो। मिसन अस्पतालमाथिको सिँढीबाट ओर्लँदा सीता बोलिन्- ए बूढा सुन्नुस् त, हामी गंगा पेटमा हुँदा आएको अस्पताल यै त हो नि। हैन र ?' दाहालले जवाफ दिए- हो, यही हो। उ बेला सानो थ्यो, अहिले भव्य रैछ।'
मिसन अस्पताल परिवारले अकस्मात आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा दाहाल नगै नहुने भो। परिवार सबै गाडीमा अघि लागिसकेका थिए। दाहाल भने एक्लै भए पनि जनताको स्वागत बटुल्न लागे। भर्खरको भर्खरै दाहाललाई हेर्ने र फूल दिनेको ताँती लाग्यो। 'धित मारेर भेट्न म फेरि आउँछु, अहिलेलाई हतार पनि भो।' दाहालको मनमा जनताका फूल बट्याउँ भन्ने थ्यो तर परिवार दल भने अगाडि लागिसकेकाले सबैलाई हात हल्लाउँदे गाडी चढे दाहाल।
Posted by हरिप्रसाद पोखरेल at 10:09 PM
Adams Kevin December 1, 2014 at 4:32 PM